La dagaalanka caabuqa Covid-19 ee Wadamada Yurub - Chamber of Somali Writers
Mudo labo bilood ku dhawaad ah ayaa dalkan Norway waxa uu ku jirey xaalad caabuq xakameyn ah, oo meel walbaa la xirey, saameyn weyna ku yeelatey dadkii. Qofkii ugu horreeyay ee laga helo fayraska dalka Norway ayaa aheyd haweeney ka soo laabatay safar ay ku tagtay dalka Shiinaha, dhammaadkii Febraayo. Qofkii u horeeyay ee u dhintana uu noqdey odey waayeel iyo bukaan ahaa. Waxuu dhintey 12-kii Maarso, 2020. Isla maalintaa ayay dowlada Norway soo rogtey talaabooyin xakameyn ah, si faafida caabuqa loo xadido.
Hay’adda Caafimaadka Aduunka, WHO ayaa 11-kii Maarso ku dhawaaqdey in feyraskii uu ka gudbey xaaladd pandemic (cudur faafa) una gudbey xaaladd saf-mareen ah (epidemic). Isla maalintaa ayay Denmark ku dhawaaqdey talaabooyin xakameyn ah, halka ay Norway ay maalintii ku xigtey ay ku dhawaaqdey. Sweden, bilowgii wax talaabooyin ah maysan qaadin, ilaa ay dhimashadii ku badnaatey ka dibna xakameyn aan xooganayn bay bilaabeen. Balse saddexda dal waxey isaga mid ka ahaayeen wacyi gelinta, in la ilaaliyo nadaafada, dhaqida gacmaha, iyo inaa lays taaban oo la kala fogaado
Maxaa laga baran karaa sida ay Norway ula dagaalantey caabuqa?
Hogaanka wanaagsan qiimihiisa waxa uu ka muuqdaa sida ay iskugu xiran yihiin maamulka iyo shacabkiisa, iyo sida ay wadajirnimo ugu howl galaan marka ay masiibo ama dhibaato soo gaarto. Maamulka noocaa ah, kuma ekaado keliya xalinta dhibka, balse daryeelida shcabkana ma hilmaamo. Hogaankaa labo ficil isku qaban karo, waa hogaanka guuleystaa. Waana waxa dalkan lagu arkey. Mucaarad iyo muxaafad isku meel ayay uga soo wada horjeesteen la dagaalanka caabuqa. Isku cod ayay wada yeesheen. Sida ay dadka ula hadleen, mar walba ay u wargeliyeen hadba xaalada meesha ay mareyso, waxay dhagaysteen warka dadka oo tixgaliyeen cabashadooda taasina waxey sahashey in ay shacabka kalsooni ka mutaan, talaabooyinkoodana la raaco.
Markii uu feyraska ka bilaabanayay dalka Shiinaha dhamaadkii sanaddkii hore, looma maleyneyn in wakhti gaaban gudaheed uu dilaa aduunka ku noqon karo. Dalkii ugu horeeyey Yurubta ee feyraska soo gaaro waxa uu ahaa Talyaaniga, oo si ba`an buuna ugu habsadey. Markaa ayaana lagu baraarugay halista uu yeelan karo hadii aan laga hortegin. Talyaaniga waxuu ka mid ahaa dalalkii u gurmadey Shiinaha markii ay la tacaalayeen dhibkaa, balse markii uu isagu kaalmo u baahdey, oo qeylo dhaan u dirsadey asxaabtii Midowga Yurub ee uu xubinta ka ahaa, waa loo aamusey.
Midowga Yurub ayaa ku ku dhisan fikrad ah hadii mid ka mid ah waddamada xubnaha ka ah, dhib soo gaaro, in loo gurmado. Balse markii uu Talyaanigu caawimaad u baahdey waa loo jilbo aasay. Waxey taa muujisey in ku tiirsanaanshaha Midowga Yurub aysan wax weyn keeni karin, hadii uusan dalka keyd ku filan heysan, xaajaduna nin walbow iyo naftaa noqoto.
Ka hor, inta aan xakameynta caabuqa la soo rogin, Norway waxey ku fakartey isticmaalida istiraatiijiyad la dhaho `herd immunity`oo ah tan ay Sweden isticmaashey. In wax xakameyn ah la sameyn, caabuqa iska fido, dadkana aakhirkii difaac bey ka yeelan feyraska.
Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee Norway ayaa qiyaas tirakoob ku sameeyeen hadii istiraatiijiyadda la isticmaalo, waxa ay xaaladu noqon karto. Waxey sheegeen in mudo gaaban gudaheed, labo malyan ku dhawaad oo ah bulshada kala barkeed uu feyraska ku dhici doono. Ka dib waxaa bilaabatey dood ah, hadii dad intaa le`eg ay jiradaan, cisbitaalo lagu daaweeyo ma jiraan? Dhaqaatiiro iyo aqoonyahanno caafimaad oo dadkaa daryeeli kara ma la heli karaa? Qalab daawo oo dadka ku filan ma jiraan? Jawaabahaa oo dhan waxey noqdeen Maya.
Tirakoob sameyntaan waxey sahleysaa in loo gaashaan qaato, keydna loo sameysto dhibka kugu soo socda. Sannad walba dad gaaraya 10 kun ku dhawaad ayaa u dhinta cudurka kansarka. Sannadkii 100 qof ku dhawaad ayaa neef u dhimata. Dalka oo dhan wax ka badan kun sariiraha deg dega ee isbitaalka (intensive beds), ma heysto. Qiyaasta la heysto darteed, waxey kaliftey in aan istiraatiijiyadda ‘herd immunity’ la qaadan karin, balse badalkeeda la qaatey istiraatiijiyadda `The Hammer and the Dance`. Oo ah istiraatiijiyaddii ay Shiinaha ku dhaqmeen, guul weyna ka gaareen muddo afar asbuuc gudahood ah.
Maalintii uu dhintey qofkii ugu horeeyay ee feyraska galaabsado, 12-kii Maarso ayay dowlada Norway soo rogtey talaabooyinka xakameynta. Xakameyntaa waxey noqotey talaabooyinkii abid la qaado, iyadoo xilli nabad ah lagu jiro. Dalkoo dhan ayaa hal mar la xirey, oo sababtey in mudo gaaban gudaheed dhaqaalihii dalka hoos u dhac weyn soo gaaro. Boqolaal kun oo shaqo ayaa lumey, qiimihii lacagta dalka iyo beecii saliida oo dhacsanaa ayaa ka sii darey. Wax soo saarka guud ee dalka (GDP) ayaa boqolkiiba 14% hoos u dhac soo gaarey. Nasiib wanaag, nidaamka dalkan ayaa ku dhisan nidaam is daryeelid ah (welfare system); Canshuurta ay dadka bixinayaan iyo dakhliga ka imaanaya beeca saliida iyo gaaska ayaa noqdey keyd lagu badbaadey. Dadkii shaqooyinka lumiyay iyo ganacsiyadii dhaqaalaha lumiyay, waxey caawimaad dhaqaale ka heleen keydkaa.
Caabuqii oo aan weli laga soo kobsan, daawadii oo aanan la helin, waxa uu yahey iyo waxa sababey oo aanan si xeel dheer weli la fahmin, qasaaraha uu geystey weli la qiyaasin, ayay dalalkii Yurubta Galbeed waxey bilaabeen ka doodida qiyamka bulsho isku xira, heykalka maamul siyaasadeed lagu wajehi karo marka uu dhib yimaado iyo muhiimada ay leedahey in uu dal heysto keyd ku filan hadey noqoto raashin, qalab iyo daawo.
Waxaa xaqiiq ah in jawiga doodaha ay is badeli doonaan marka laga soo baxo xakameynta, layskuna diyaarinayo. doorashada baarlamaanka ee sanadka dambe.
Qormadaan waxaa qortay Ubah Abdulahi Aden
Ubah waa aqoonyahanad u shaqeysa wasaarada is dhexgalka iyo ajaanibka, kuna takhasustey xadgudubka ku saleysan jinsiga. Waa siyaasiyad ka tirsan xisbiga Shaqaalaha, ahna xildhibaanada golaha Degaanka ee Oslo, Norway. Waa markii labaad ay xildhibaanad tahey.
Ubah waa qoraagii u horeeyay ee qora buugg af soomaali ku qoran oo ka hadlaya gudniinka, Buugaa waa online, lacag la`aan baad ku soo daksan kartaa. Buugga magaciisa waa Wad-haween. Ubah waa bloggist, dhawr luuqad wax ku qora. Bloggeeda waa http://ubahaden.com/